ကန်ဒီကြိုက်တဲ့ Video Editing software လေးတစ်ခု Share မလို့ပါ။ အဲ့ဒါလေး မပြောခင် ကန်ဒီ ဘာEditing Software တွေသုံးလဲဆိုတာ အရင်ပြောပြပါရစေ။ ကန်ဒီ့ဗွီဒီယိုတွေကို ဘာနဲ့ Edit လုပ်လဲ မေးတဲ့သူတွေ ရှိလို့ပါ။ ကန်ဒီသုံးတဲ့ Software တွေက...(၁) VAIO Movie Story...ကန်ဒီ့ကွန်ပျူတာမှာ အစတည်းကပါတာလေ။ သိပ်မကောင်းဘူး။ သူက Auto movie လုပ်ပေးတာ။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်သိပ်ပြင်လို့ မရဘူး။ ဆည်းလည်းသံသီချင်းလေးနဲ့ကန်ဒီလုပ်ထားတဲ့ ဗွီဒီယို ကြည့်ဖူးတယ်မလား။ ဒီပိုစ့်မှာ ရှိသည်။ အဲ့ဒါ VAIO Movie Story နဲ့ လုပ်တာလေ။(၂) Sony Vagas Pro...ှSony Vagas က ကန်ဒီ ဟိုတလောကမှ သူငယ်ချင်းဘလော့ဂါတယောက်ဆီက ရထားတာ။ သိပ်မကျွမ်းကျင်သေးဘူး။ သူက Pro Softwareလေ။ အရမ်းအရမ်း မိုက်တယ်။ နည်းနည်းလည်း ရှုပ်တယ်။ ခုမှ လေ့လာနေတုန်း။ လောလောဆယ်တော့ မြန်မာလို စာတန်းမထိုးတတ်လို့ အခက်တွေ့နေတယ် >.<(၃) Window Live Movie Maker 2011...ဒါကတော့ ကန်ဒီအကျွမ်းကျင်ဆုံးပေါ့။ သုံးတာလည်း ကြာပြီလေ။ သုံးရ အရမ်းလွယ်တယ်။ နောက်ပြီး Free Software လေးလေ။ Proတော့ မဟုတ်ဘူး။ ဒါပေမယ့် Feature တော်တော်စုံတယ် ပြောလို့ရတယ်။ Editing software တခုမှာ လိုအပ်တဲ့ Feature တွေပါတယ်လေ။ အဲ့တော့ သာမာန်ဗွီဒီယိုလေး တခုတော့ ကောင်းကောင်းထွက်တယ်။ ခရီးသွားရင်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကိုယ်ရိုက်သမျှ ဓာတ်ပုံလေးတွေ ရှုခင်းလေးတွေကို ဗွီဒီယိုလေးတစ်ခုအဖြစ် သိမ်းထားရင် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် အမှတ်တရလေးဖြစ်တာပေါ့။ ဒီနေ့ အဲ့ဒီ Software လေးကို Share ချင်လို့ပါ။ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ချင်ရင် ဒီနေရာ ကိုနှိပ်ပါ။ (ဒီနေရာဆိုတဲ့နေရာကို Pointer တင်ပြီး နှိပ်ပါ)ကန်ဒီ့ ရုံးပတီသီးဟင်း ဗွီဒီယိုအတွက် လုပ်ထားတဲ့ Project လေးကို Screenshot ရိုက်ပြထားတယ်။ သူ့မှာပါတဲ့ Feature လေးတွေကိုလည်း ပုံလေးတွေနဲ့ ရှင်းမယ်လေ။ ဓာတ်ပုံတွေက Qualityတော့ တော်တော်မကောင်းဘူး။ ကန်ဒီပဲ Screenshot မရိုက်တတ်လို့လား မသိဘူး။ နည်းနည်းတော့ သည်းခံပေးနော်။ ဟုတ်ဘူး များများ သည်းခံပေး :Pဒါက Edit လုပ်နေရင် မြင်ရမယ့်အနေအထား။ ဘယ်ဖက်မှာ ကိုယ်ပြင်ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုကို ကြည့်လို့ရတယ်။ ညာဖက်ကတော့ ကိုယ်ထည့်ချင်တဲ့ Video Clip တွေ ဓာတ်ပုံတွေ ထည့်ရတာပေါ့။Home မှာဆို ဒါလေးတွေပါတယ်။ Snapshot က ကိုယ့်ဗွီဒီယိုထဲကပုံကို ဓာတ်ပုံပြန်လိုချင်ရင် သုံးဖို့ပေါ့။ Candy's burmese ပိုစ့်မှာ ကန်ဒီထည့်ထားတဲ့ပုံက ဒီကနေ Snapshot နဲ့ ပြန်ရိုက်ထားတာ။ အပျင်းအရမ်းကြီးရင်တော့ Auto Movie Theme ကိုသုံးလို့ရပါတယ်။ သူ့ဟာသူ movie တစ်ခု လုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ကိုယ်က ခေါင်းစဉ်လေးလောက် ထည့်ရုံပဲလေ။Animation နဲ့ Visual effect နဲ့က နည်းနည်းဆင်တယ်။ ဘာကွာလဲဆိုတော့ Animation က Transition သဘော။ Clip တခုနဲ့ တခု အပြောင်းမှာ ထည့်လို့ရတဲ့ Effect တွေပေါ့။ ဓာတ်ပုံဆိုလည်း Pan and Zoom မှာ Zoom ဆွဲလို့ရတယ်။ Visual effect ကကျတော့ Clip တခုလုံးကို Effect ထည့်တာမျိုးပေါ့။ အဲ့မှာ အလင်းအမှောင်လည်း ပြင်လို့ရတယ်။Project က ကျတော့ ကိုယ့်ဗွီဒီယိုပေါ်မယ့် Ratio ကို ပြင်ချင်ရင် သုံးဖို့ပေါ့။ View ကတော့ သိပ်မသုံးပါဘူး။ ကိုယ် Edit လုပ်တဲ့အခါ မြင်ရတဲ့ Clip အရွယ်အစားတွေ ကြီးချင် သေးချင်ရင်ပေါ့။ Video နဲ့တော့ မဆိုင်ဘူး။အရေးကြီးတဲ့အပိုင်း ရောက်လာပြီ။ Video Tool နဲ့ Music Tool မှာ Fade in .. Fade out ရှိတယ်နော်။ Video Tool က Fade in .. Fade out က Video ထဲမှာပြောတဲ့ ကိုယ့်အသံစ၀င်တာနဲ့ ပြီးတာကို ပြင်တာ။ Music Tool က Fade in.. Fade out ကကျတော့ သီချင်းအ၀င်နဲ့ အပြီးကို ပြင်တာ။ အဲဒါလေးထည့်မှ ကောင်းတယ်။ အထူးသဖြင့် အပြီးကိုပေါ့။ သီချင်းက မပြီးသေးဘူး ဗွီဒီယိုက ပြီးသွားတဲ့အခါမျိုးဆို Music ကို Fade out မလုပ်ထားရင် ဒုံးတိကြီး ပြီးသွားတတ်တယ်။ Video volume မှာ ကိုယ့်Videoထဲက အသံကို adjust လုပ်လို့ရတယ်။ ဒီဗွီဒီယိုမှာဆို အဲ့ဒါကို ကန်ဒီ Off ထားတယ်။ Music နဲ့ပဲ သွားထားတာလေ။Video Tool အကြောင်းဆက်မယ်နော်။ အဲ့မှာ Trim Tool ဆိုတာက ကိုယ်လျှောက်ရိုက်ထားတဲ့ Video တွေမှာ မလိုတာတွေကို ဖယ်တာပေါ့။ Split ကကျတော့ Clip တခုစီ ဖြတ်တာ။ ဒီနေရာမှာ Editing Software တခုနဲ့ တခု အသုံအနှုန်းတွေ ကွာတတ်တယ်။ သဘောကတော့ အဲ့ဒါပါပဲ။ Speed ကကျတော့ မြန်တာ နှေးတာပေ့ါ။ Slow motion လုပ်ချင်လား။ မြန်မြန်လုပ်ချင်လားပေါ့။ အဲ့ Feature က အရင် Version မှာ မပါဘူး။ 2011 Version မှာမှ သူတို့အသစ်ထည့်ထားတဲ့ Feature လေ။ မိုက်တယ် :Dဒါကတော့ Text Tool ပါ။ အဲ့မှာ ကိုယ်ထည့်ထားတဲ့စာကို ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ ၀င်ချင်လဲ ပြင်လို့ရတယ်။ Font.. Font size.. Text Duration အစုံပေါ့ :Dဒါက Edit လုပ်နေတဲ့ အနေအထားမှာ မြင်ရတာကို ပြထားတာ။ နံပါတ် (၁)က Music လေ။ သူက အပေါ်မှာ ပြတယ်။ နံပါတ် (၃)က Music တခုနဲ့ တခု အဆက်ကို မြင်အောင် ၀ိုင်းပြထားတာ။ ကန်ဒီ ပထမသုံးထားတာက ငှက်သံလေးတွေ။ ပြီးမှ တကယ့်သီချင်းဝင်တာပေါ့။ နံပါတ် (၂)က စာတန်းထိုးတာကို ပြထားတာ။ သူက အောက်မှာ ပြတယ်။ နံပါတ် (၄)မှာ Transtion effect ကို ကန်ဒီ ၀ိုင်းပြထားတယ်။ မြင်အောင်လို့လေ။ ကြည့်ကြည့် ကန်ဒီ Clip တိုင်းကို Tansition မထည့်ဘူး (မမြင်ရလောက်ဘူး >.<) လုပ်လက်စ Video ကို သိမ်းချင်ရင် Save Project နဲ့သိမ်းနော်။ အားလုံးပြီးလို့ Movie File ပြောင်းချင်ရင်တော့ Save Movie နဲ့ ပြောင်းပေါ့ :D :Dရှင်းပြတာတော့ ပြီးသွားပြီ။ အရမ်း လိုက်ရှင်းပြနေသလိုများ ဖြစ်သွားလား?? အဲ့လိုဖြစ်သွားရင်လည်း ကန်ဒီ့စေတနာလေးကို နားလည်ပေးနော် ဟီးဟီး။ အားလုံးပြီးတော့မှ ထွက်လာတဲ့ Result ကို မပြရင် တမျိုးကြီး ဖြစ်နေမယ်ထင်လို့ ကန်ဒီ့ ဗွီဒီယိုလေးပါ တင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ ဒီဗွီဒီယိုလေးကို ဟင်းချက်သင်နေတယ်ဆိုတာမျိုးအနေနဲ့ မကြည့်ဘဲ ကန်ဒီ လက်ဆော့ထားတဲ့ ဗွီဒီယိုလေးတခုအနေနဲ့ပဲ ကြည့်ပေးပါ။ ကန်ဒီ ဟင်းသိပ်မချက်တတ်တာလည်း အားလုံး သိတာပဲ။ ကန်ဒီ့အတွက်က ဟင်းချက်ချင်တယ်ဆိုတာထက် ဗွီဒီယိုလုပ်ချင်တယ် ဆိုတာက အဓိကလေ :Pဟိုနေ့ကပဲ နန်းကြီးသုပ်လုပ်နည်း ဗွီဒီယိုလုပ်ပေးပါတဲ့။ မန့်သွားတယ်။ ခုနန်းကြီးသုပ်လုပ်နည်းတွေ လိုက်ဖတ်နေတယ်။ အဲ့လိုတော်တာ ဟီး :P Chinese New Year Holidayမှာ ဘာလုပ်ကြမှာလဲ??? ကန်ဒီကတော့.......................................... ပြောဘူး :P xDပျော်ရွှင်ပါစေနော်..
အစ်ကိုသုံးတာကတော့ Corel Video Studio Pro X4 ကို ဒေါင်းလုပ်ချပြီးတော့ ခရက်ချိုးပြီးသုံးတာညီမလေး..။ ညီမလေးသုံးတဲ့ဟာလေးက ရိုးရိုးလေးဆိုတော့ ကောင်းတာပေါ့..။အရင်တုန်းကတော့ Ulead Vedio Studio(Corel ကပဲထုတ်တာ.)ခေတ်စားလိုက်သေးတယ်.။အခုတော့ ဘာမှမလုပ်ဖြစ်ပါဘူးညီမလေးရာ..ဂစ်တာဆော့ဝဲလေးတွေ လိုက်စမ်းနေတယ်.။ ဗွီဒီယို မလုပ်ဖြစ်သေးဘူး..။ သီချင်းပဲ လုပ်ချင်စိတ်ပေါက်နေတာ..။ Valentine Day အမီပေါ့...။
ဘီဒိုကတော့လောလောဆယ်ပလေးခဏလုပ်ပြီး(မြတ်ကြည်ပြောသလို)ခဏရပ်ထားရပါတယ်း)သဘောတရားလေးနားလည်သလိုလိုရှိလို့စမ်းကြည့်ကြည့်မယ်ကန်ဒီး)ချစ်ခင်လျှက်သမီးစံ
သဘောကျပေမယ့် ကွန်နယ်ရှင်က လေးတော့မဒေါင်းတော့ပါဖူးကွယ်နောက်များမှပဲ ဒေါင်းတော့မယ်တရုတ်နှစ်သစ်ကူးမှာဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ အမ်ပေါင်းပေးမယ့်သူတွေကိုလိုက်ရှာမယ်း)း)မောင်ဘကြိုင်
ဟန်ကျတာပဲ....အကိုလိုချင်နေတာနဲ့ ကန်ဒီတင်ပေးတာနဲ့က တိုင်းယက်သည် ပက္ကလာ မိုးရွာသည်နှင့် အခန့်သင့်ဆိုသလိုပါပဲလား....ကျေးကျေးဗျား...၊
ပါးကွက်ကြားကလေးနဲ့ ချစ်စရာလေးး) အဲဒိရုံးပတီသီးဟင်းကတော့ အရမ်းကြိုက်...ပန်းချီ..
ပိစိ မျက်နှာပြောင်နေတာ ကြည့်နေတာနဲ့ ဘာဟင်းချက်မှန်းတောင် မသိလိုက်ဘူး။ နောက်မှ ပြန်ကြည့်ရတယ်။ ရုံးပတီသီးဟင်းတဲ့။း)ပေးထားတဲ့ ဆော့ဖွဲလေး ဒေါင်းသွားတယ်။ အသုံးလိုအပ်မယ်ထင်လို့။ လိုအပ်ရင် သူကြီးမင်း ဖြတ်ထုံး ဗီဒီယိုမှတ်တမ်းတွေ တင်ပေးရအောင်လို့။း)
ဘီဒိုထဲကမော်ဒယ်လေးက ချစ်ချာလေးတော့... ရုံးပတီသီးလေးစားသွားတယ် ရှလွတ်! ကောင်းမှကောင်း..
ကန်ဒီရေရုံးပတီးသီး ဆိုရင်တော့သတိနော် ကိုဒုကိုမေးကြည့်လိုက်
ရုံးပတီသီးတော့မမြင်ဘူးအေမယ်တော်လေးကိုဘဲ ကြည့်သွားတယ်ပါးကွက်လေးကိုချစ်လို့း)ချစ်တဲ့အမမဒိုးကန်
ယူသွားပြီ ကန်ဒီရေ ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်အိမ်ပြန်ကလိလိုက်အုံးမယ်..ပျော်ရွှင်နိုင်ပါစေဗျာနောင်များလည်း ရှယ်နိုင်ပါစေ..............အာကာမိုးနိုင်
video လာကြည့်တာမမတီ downသွားတယ်(videoမဟုတ်ပါ software) ခင်မင်လေးစားလျက်-လေလွင့်
ကန်ဒီရေအခုပဲ valentine day အတွက် အမျိုးသားဖို့ video file လေးတစ်ခုလုပ်ဖြစ်သွားတယ်software ကသုံးရတာ အရမ်းလွယ်ပြီးအဆင်ပြေလို့ ညီမလေးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်တယ်အရင်က အဲလိုတွေလုပ်ရတာအရမ်းပျင်းတယ် မလုပ်တတ်ဘူး အခုတော့ ကန်ဒီ့ကျေးဇူးကြောင့် ပထမဆုံးလုပ်ဖြစ်သွားတယ် ဝိုင်း
@၀ိုင်း<< ဟုတ်လား မမ၀ိုင်း.. ကျေးဇူးတင်စရာမလိုပါဘူး.. ကန်ဒီရေးတဲ့စာ အကူအညီဖြစ်တယ်ဆိုရင်ပဲ ညီမက ပျော်နေတာ ဟီးဟီး :D :D@Anonymous<< Hi Hello :P
:)ကန်ဒီ ဟုတ်ပါပြီ ကန်ဒီအချိန်ရရင် ဟင်းချက်တဲ့video တွေတင်မကပဲ beauty n style video တွေပါ youtube မှာတင်ပါလား foundation routie တို့ skin care တို့ စသဖြင့် တခြား make up guru တွေလိုပေါ့ ကန်ဒီကချစ်စရာလေး ပြီးတော့ အလှအပပို့စ်တွေလဲ အရင်ကတင်နေကျပဲမလား english စကားပြောနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ် မြန်မာလိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ အဲဒီမှာက မြန်မာ make up guru ကသိပ်မရှိတော့ ဥရောပသူတွေ တရုတ်တွေအသားအရေတွေနဲ့ လိမ်းထားတဲ့ tutorial တွေဆို မြန်မာမိန်းကလေးတွေ အသားရောင်နဲ့ လိုက်လုပ်လို့ အဆင်မပြေဘူးလေ အဲလိုမျိုးတင်ဖြစ်ရင် အားပေးမယ် ဝိုင်း
ဟီးဟီး.. မမကတော့ လုပ်ပြီ...အဲ့လိုကြီးလုပ်ဖို့ကျ သတ္တိမရှိသေးဘူးဂျ..ကိုယ်ကလည်း သိပ်တတ်တာမဟုတ်တော့ :P :P :P